Ny madrigal hamidy 550 Ar ny iray kapoaka eny an-tsena raha 1.850 Ar ny iray kilao. Ny vary stock sisa no mba mora amin’ny ankapobeny izay hamidy 530 Ar ny iray kapoaka na 1800 Ar ny iray kilao. Antony tena mahalafo ny vary zanatany ny tsy fahampian’ny ranon’orana tamin’ity taona ity. Eo ihany koa ny fiakaran’ny vidin-tsolika, antony mampidangana ny saram-pitaterana ny entana avy any ambanivohitra. Voatery miaina amin’ny vary stock ny ankamaroan’ny olona. Ho an’ireo tsy mahazaka ity karazam-bary ity indray dia ny vary zanatany no tsy maintsy vidina saingy ahena hatrany amin’ny antsasany ny habetsany ary fenoina hanikotrana toy ny mangahazo, indrindra fa ho an’ireo maro an-trano. Nomarihin’ireo mpivarotra nanaovana fanadihadiana fa mbola mety hiakatra ny vidim-bary amin’ny taona ho avy, indrindra amin’ny fotoana hahalanian’ireo tahirin’ny vary zanatany. Tsiahivina fa tsy nisy intsony ny andraikitra noraisin’ny fitondram-panjakana taorian’ny nanafaran’izy ireo ny vary stock avy any ivelany.